L’incapacité temporaire lorsque vous ne pouvez, ယာယီ, plus travailler ou exercer vos fonctions. Elle peut être temporaire partielle (ITP) ou temporaire totale (ITT). L’incapacité permanente lorsque vous ne pouvez, définitivementအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ၊ ၎င်းသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အမြဲတမ်း (IPP) သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မသန်စွမ်းမှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ မမှန်ကန်မှု- ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။ ပြီလ 17th, 2022Tranquillus
ဖတ်ရန် ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးအကောင့်: ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်တန်းအတွက်ငွေကြေးအကူအညီ
လွန်ခဲ့သောကျွန်ုပ်သည် ချို့တဲ့မှုသတိပေးချက်၏ လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့သည်- အဘယ်အကျိုးဆက်များ ရှိသနည်း။
အောက်ပါအလုပ်အကိုင်ထိန်းသိမ်းထားမှုအခြေအနေတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။